सजाने घर को यो अद्भुत परम्परा अमेरिका र पश्चिमी युरोप आए। निजी घरहरू र अपार्टमेन्ट ढोका, त्यहाँ विकर क्रिसमस ट्री शाखा भोज टेबल र खिलौने सजाउनु। हामी दुवै तयार किन्न र आफ्नो हातले क्रिसमस माला बनाउन सक्छ। र धेरै आनन्द कसरी परिवारको कान्छो सदस्य यसलाई ल्याउन विशेष गरी यदि, यो पेशा ल्याउन सक्छ।
आफ्नै हातले एक क्रिसमस पुष्पांजलि सिर्जना गर्न, हामी एक जग आवश्यक छ। यो एक बाक्लो तार वा दाखको बोट र फोम रूपमा पराल को एक बन्डल हुन सक्छ। बिक्री मा त्यहाँ आफ्नो हातले एक क्रिसमस पुष्पांजलि केही मिनेट हुन सक्छ बनाउन गर्ने विशेष फोम खाली छन्। आधार चयन, अवधारणा र रंग योजना विचार गर्नुहोस्।
मूल नजर प्राकृतिक सामाग्री देखि शिल्प। पाइन वा कुनै पनि softwood को शाखा द्वारा यस्तो सिट्रस रूपमा पागल, बादाम, दालचिनी लाठी, वेनिला, सुकेको फल स्लाइस, थप्नुहोस्। स्टाइलिश क्रिसमस पुष्पांजलि आफ्नो हात (फोटो संग हामी कागज मा प्रकाशित जो), बेल देखि गर्न सकिन्छ स्ट्रिमरहरू, रंग रिबन, मोती संग सजाया। केन्द्र मा तपाईं FIR twigs वा सुकेको फूल संग एक फूलदान राख्न सक्नुहुन्छ। सजावट को रंग योजना कुनै पनि हुन सक्छ, तर सबै भन्दा अक्सर प्रयोग गरिन्छ उज्ज्वल रातो, सुन, नीलो र चाँदीको बाक्लो पत्ते को पृष्ठभूमिमा। विशेष solemnity तालिका सजावट (एक क्रिसमस पुष्पांजलि, आफ्नै हात, सामान्यतया केन्द्र मा स्थित बनाइएको) मोती सेतो र क्रीम दिनुहोस्।
को coloristic छनौट सजाय क्रिसमस ट्री, अतिथि को स्वाद र जीवित कोठा वा हल को सामान्य डिजाइन को शैली सम्झना।
यस्तो artefacts धक्का मा सधैं उपयुक्त र आकर्षक आवरण। प्राकृतिक-रंग र चाँदी-जलप वा सुन-जलप रूपमा, तिनीहरूले हरियो विभिन्न रंग संग पूर्ण जानुहोस्।
अक्सर, क्रिसमस माला आफ्नो हात र snowflakes सजाउनु, र सामान्य क्रिसमस सजावट (यस मामला मा, तिनीहरूले पातलो तार वा साटन रिबन प्रयोग गरेर आधार वरिपरि fastened गर्न सकिन्छ)। यस्तो पागल, अङ्गुर खरानी, Ornamental shrub जामुन, सुकेको rosehip वा acorns, एक स्प्रे-रंग कोट सुन वा "चिसो" प्रयोग गरेर रूपमा प्राकृतिक सामाग्री। दृश्यहरु संलग्न टास्ने बन्दूक, ठीक तार वा सिलना - यो रंग tulle वा organza मिल्ने र्याप गर्न जग हुन सक्छ। तपाईं जल रुचि विशेष गरी यदि - - आफ्नो हातमा "समुद्री" क्रिसमस पुष्पांजलि ठूलो गोले संग सजाया गर्न सकिन्छ।
कृत्रिम वा सुकेको फूल, तारा, पन्नी वा कागज, ग्लास स्वर्गदूतहरू र बेल snowflakes - विचार सेट गर्न सकिन्छ। सद्भाव राख्न, यो पुष्पांजलि कुनै थप4भन्दा रंग, उदाहरणका लागि,2मुख्य र2अतिरिक्त हुनुपर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। सोही, आकार पनि राउन्ड हुन छैन। उदाहरणका लागि, मूल र आकर्षक आवरण क्रिसमस माला मा, आफ्नो हात हृदय को रूप मा गरे। दृश्यहरु रूपमा, तपाईं घरमा छोराछोरीलाई छ, विशेष गरी यदि - तपाईं घुम्रेको कुकीहरू र चकलेट, तार वा रिबन तिनीहरूलाई संलग्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साटन चुल्ठो लट छल्ले को रूप मा पनि एक सरल आधार, यो एउटा ठूलो परिणत गर्न सक्नुहुन्छ तालिका सजावट। र तपाईं यस्तो सानो पुष्पांजलि र मोमबत्ती धारकों संलग्न सक्नुहुन्छ - र जमघट बिहान सम्म ढिलाइ हुन सक्छ।
छोराछोरीको रचनात्मकता: टालो सजावट "उलनेबुला"
विश्वव्यापी योजना भुईँकटर (हुक)
ढाँचा तकिया आफ्नै हातले "गुलाब" (फोटो)
आफ्नै हातले ग्रीक शैलीमा पोशाक। एक्सप्रेस विकल्प
ठीक कला - जूट filigree
Karaite Pies: अविस्मरणीय पेस्ट्री। एक पाइ Karaite कसरी खाना पकाउनु
अपार्टमेंट कसरी निजीकरण गर्न?
यूराल एयरलाइन्स एयरलाइन्स: यात्रुहरू प्रतिक्रिया
सक्रिय कोइला: आवेदन र उपयोगी गुणहरू
"Idrinol": प्रयोगको लागि निर्देशन। समीक्षा, मूल्यहरू तयारीको को वर्णन
कसरी छाला को एक जग रंग चयन गर्न: सुझावहरू
सार्वजनिक निविदाहरु: यो के हो?
तेज आँखा र नियन्त्रण
तपाईं एक महिलाको जीवन मा एक मानिस किन चाहिन्छ?